TAG Heuer nampifandray «Golf Edition» 45: Famaritana sy vidiny ofisialy | Androidsis
Huawei dia nandao antsika tamin'ity herinandro ity tamin'ny famantaranandrony vaovao. Na dia tsy ilay mpanamboatra sinoa malaza aza no nandefa famantaranandro vaovao teny an-tsena. Ary ny marika fanta-daza TAG Heuer dia manana modely vaovao eny an-tsena. Na dia eo aminy aza dia mahita famantaranandro lafo vidy isika. Ity ilay TAG Heuer Connected 45 "Golf Edition", izay araka ny anarany dia natomboka manokana ho an'ireo mpilalao golf.
Ny marika dia fantatra amin'ny famantaranandrony, efa niditra tamin'ity sehatry ny tsena ity. Ity TAG Heuer Connected 45 "Golf Edition" vaovao ity dia maodely manana zana-tsena tena manokana momba an'io. Famantaranandro mihaja, izay araka ny nampoizina, dia tsy manana vidiny mora.
Tonga tamin'ny «Golf Edition» misy ny TAG Heuer Connected 45 Efijery haben'ny 1,39 inch, miaraka amina vahaolana 400 × 400 teboka ao. Ho an'ny RAM, ny fampiasana dia natao tamin'ny 512 GB sy tahiry anatiny 4 GB amin'ny famantaranandro. Ankoatr'izay, araka ny nolazain'ny orinasa dia manana fizakan-tena hatramin'ny 25 ora isika. Misaotra ny batterie 410 mAh.
Amin'ny fampiasana ny rafitra fiasa farany an'ny Wear OS farany. Ho fanampin'izay, miaraka amin'ny GPS sy NFC izy io, hahafahan'ny mpampiasa mampiasa azy rehefa mandoa vola aminy amin'ny fomba tena tsotra. Raha mamela antsika haminavina ny anaran'ny fiambenana, dia manana anjara asa natao hilalao golf koa isika.
Ka TAG Heuer dia nampiditra fiasa miaraka amin'izany manana firaketana ny fotoana anaovana io fanatanjahantena io, ho fanampin'ny fampiharana ho azy. Ka aseho azy ho safidy mety indrindra ho an'ireo tia an'ity fanatanjahantena ity amin'ny fotoana rehetra. Famantaranandro tena manokana ho an'ity fizarana ity.
Toy ny sisa amin'ireo fiambenana ao amin'ny katalaogin'i TAG Heuer, ny vidin'ity maodely ity dia tsy dia mora loatra. Ireo liana amin'izany tsy maintsy mandoa 1.850 $ amin'izany izy ireo. Ka tsy isalasalana fa fitsaboana lafo vidy tokoa. Misy safidy mahaliana be miaraka amin'ny vidiny ambany, araka ny hitantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » TAG Heuer Connected 45 "Golf Edition": Smartwatch lafo vidy vaovao
Inona no hatao raha tsy mahazo fandrakofana ao an-trano ny findainao Android
Apple Music dia hifanaraka amin'ny Chromecast